आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (७ साउन २०७६ सोमबार, २३ जुलाई २०१९) – Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (७ साउन २०७६ सोमबार, २३ जुलाई २०१९)
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 10 months ago July 23, 2019
श्री सूर्योत्तरायणे श्रीशाके १९४१ नेपाल सं. ११३९ वर्षा ऋतु वि.सं. २०७६ श्रावण ७ गते तद्अनुसार सन् २०१९ जुलाई २३ तारिख मंगलबार श्रावण कृष्णपक्ष षष्ठी तिथि १२ः३० पर सप्तमी तिथि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र १०ः४८ पर रेवती नक्षत्र अतिगण्ड योग ६ः५४ पर सुकर्म योग वणि करण १२ः३० पर बब करण आनन्दादिमा सिद्धि योग चन्द्रमा मीन राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौमा सूर्योदय विहान ५ः२३ मा भयो र सूर्यास्त साँभ m१८ः५७ मा हुनेछ । शुभ समय अभिजित ११ः४२ देखि १२ः३७ । राहु काल– १५ः३४ देखि १७ः१६ दिशा शूल– उत्तर ।
मिथुन राशि – कार्यमा सफलता मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्नेछ । मनोकूलको काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । आफन्तको साथ मिल्ला । यश बर्चश्वमा वृद्धि हुनेछ । धन यश मान महत्व बढ्ला ।
कर्कट राशि – शुभ र भाग्यवर्द्धक काममा सफलता मिल्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागको कर्ममा रुचि बढ्ला । यात्रा होला । ख्याति फैलिनेछ । सुख सन्तति वृद्धि होला । प्रेममा सफलता पाउनुहुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने सामर्थ्य बढ्नेछ ।
सिंह राशि – कुनै प्रकारको जोखिममा नपर्नु शुभ रहला । लगानीको कुरामा ध्यान दिनूपर्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । ठूलो रकमको लगानी र महत्त्वपूर्ण कागजपत्र आदिमा हस्ताक्षर गर्दा सचेत रहनुपर्नेछ । स्वास्थ्य र पाचनतन्त्रप्रति ध्यान राख्नु पर्नेछ ।
कन्या राशि – आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्नेछ । सुख शान्तिमा बृद्धि हुनेछ । साझेदारीको काम बन्ला । मिठो भोजन खान पाउनु हुनेछ । यात्रापरक काम बन्ला । इष्टमित्रको साथ भेटिएला । आँट उत्साह बृद्धि होला ।
वृश्चिक राशि – सुख शान्ति मिल्नेछ । इष्टमित्रको मद्दत मिल्नेछ । अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्ला । प्रेममा सफलता प्राप्ति होला । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । शुभ र भाग्यवरद्धक काम पनि बन्नेछ । मान महत्व बढ्ला ।
धनु राशि – भागदौड रहला । खर्च बढेको लाग्ला । बिबाद आदिमा नपर्नु उचित हुनेछ । नियम–कानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यप्रति ध्यान राख्नुपर्नेछ । लापर्वाही गरेमा भोली पछुतोमा पर्नु पर्नेछ । योजना र बजेट बनाइ काम गर्नु पर्नेछ ।
मकर राशि – सुख समृद्धि धन यश मान महत्व बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । आयात निर्यातसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ला । इष्टमित्रको सहयोग भेटनेछ । आयस्रोत बढ्ला । रोकिएको काम बन्नुको साथै लगानी पनि उठ्नेछ । नियमित काममा सफलता मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हनेछ ।
कुम्भ राशि – धन मान बढ्नेछ । सुख आनन्द बढ्नेछ । सभा–समारोहमा सम्मानित हुनुहुनेछ । गौरवमा बृद्धि होला । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । मनोकुलको काम बन्नेछ । साहसिक काम बन्ला । हाकिमको साथ भेटला ।
मीन राशि – दिन शुभ र भाग्यवर्द्धक सावित हुनेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । आरोग्यतामा बढोत्तरी होला । सुख शान्तिको अनुभूति हुनेछ । यात्रा होला । शुभ समाचार मिल्नेछ । धर्मकर्ममा रुचि बढ्नेछ । इष्टमित्र सुख सन्तति बढ्नेछ । प्रेममा सफलता मिल्नेछ । आमोदप्रमोदमा रमिरहनु हुनेछ । सुख शान्ति आनन्द बढ्नेछ । मान सम्मान बढ्नुसंगै ख्याति फैलिनेछ ।